သတင်း Archives - Bahuthutagabar
ယခုနှဈ ဆယျတနျးအောငျစာရငျးတှငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမညျအပါအဝငျ လူသိမြား ထငျရှားသူမြားနှငျ့ နာမညျတူ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား ပါဝငျ
ယခုနှစ် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်အပါအဝင် လူသိများထင်ရှားသူများနှင့် နာမည်တူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပါဝင် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စားရင်းတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်နာမည်တူ ကျောင်းသူတဦးကို ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရှိရသည်။ ကျောင်းသူ မအောင်ဆန်းစုကြည်(ခုံအမှတ်-၇၂၄) သည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး […]
MTV နဲ့ပတျသကျပွီး ပွောလာတဲ့ ညီနန်ဒMTV နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောလာတဲ့ ညီနန္ဒ
MTV နဲ့ပတျသကျပွီး ပွောလာတဲ့ ညီနန်ဒ ကိုယျသရုပျဆောငျထားတာက သူပွောတဲ့အတိုငျးအမစေုကိုကယျတယျ၊လကျဆှဲနှုတျဆကျတာကိုပဲသရုပျဆောငျထားတာပါတယျ။ ကနျြတဲ့တငျပွမှုအပိုငျးလှဲခြျောနတောကတော့ ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူး။ နိုငျငံရေးအမွငျအရ ဆဲနကွေတဲ့အပျေါ အနူးအညှတျတောငျးပနျပါတယျဆိုတဲ့ ညီနန်ဒ ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ထားတာက သူပြောတဲ့အတိုင်းအမေစုကိုကယ်တယ်၊လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုပဲသရုပ်ဆောင်ထားတာပါတယ်။ ကျန်တဲ့တင်ပြမှုအပိုင်းလွဲချော်နေတာကတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးအမြင်အရ ဆဲနေကြတဲ့အပေါ် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ညီနန္ဒ ရုပ်သံကိုအောက်တွင်တင်ပေးထားပါတယ် #NyiNanda #MyanmarActor #CG #CeleGabar […]
ယုနျလေး ရဲ့ MTV နဲ့ ပကျသကျပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျ တုနျ့ပွနျပွောဆိုလာတဲ့ပနျဆယျလို
ဇာတျလမျးအစမှာ NLD ဝနျကွီးက လုပျငနျးကွီးတဈခုကို အကွောငျးမဲ့ ရပျဖွဈလိုကျတယျဆိုတဲ့ ပုံစံကစတယျ။ သူတို့ပွခငျြတာက ကှီးဖွိုးပေါ့။ NLD ဝနျကွီးကွောငျ့ အောကျခွလေူတနျးစားတှေ ငတျကွ ပွတျကွ ဒုက်ခရောကျကွတယျပေါ့။ ပွီးတော့ အမစေုကို လူတဈယောကျက အီးကလိပျလို ဖုနျးဆကျပွီး ခွိမျးခွောကျတယျပေါ့။ အမစေုမကျြနှာက တဈခါမှ အပွငျမှာ မရှိတဲ့ပုံစံမြိုး […]
MTV ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ယုနျလေး ရငျဖှငျ့ပွီ
နျတျော ဒီသီခငျြးလေးကို အမြားကွီး အပငျပနျးခံစိတျနှဈပွီး လုပျခဲ့တာတှကေ အခုလိုဖွဈသှားတာ အရမျးစိတျထိခိုကျပါတယျဗြာ အနုပညာကို အနုပညာလိုပဲ မွငျပေးပါဆိုတဲ့ စကားကိုမပွောတော့ပါဘူး . တကယျ ရူးသှတျထားတာပါ . ကြှနျတေျာ့ မှာစညျးလုံးစခေငျြတဲ့ ရညျရှယျခကျြကလှဲပွီးကနျြတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး .ဒီနေ့ ဒီသီခငျြးလေး ကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့ယှကျ ဖွဈသှားသူတဈယောကျစီ […]
အကျိုးအကြောင်းမသိပဲ လာဆဲတဲ့သူတွေကြောင့်ပေါက်ကွဲလာတဲ့ ချမ်းချမ်း
August 4, 2020 Bahuthutagabar 0
အကျိုးအကြောင်းမသိပဲ လာဆဲတဲ့သူတွေကြောင့်ပေါက်ကွဲလာတဲ့ ချမ်းချမ်း မီဒီယာများမကူးယူရ…ဒီရက်​ပိုင်း…ကျမ ကို စည်းလုးံသင့်ပြီ..ြ​​မန်​မာပြည်​…သီချင်းကြည့်ပြီး ဘုမသိဘမသိ​တ ..ဆဲ​ ​နေတာ အသိတရား​လေး​တေဝင်​ ​အောင်​​ပြောမှရ​တာ့မယ် ကျမစပြီးဆို​ပေးပါဆိုကတည်းက ပါတီဆွဲဆိုမဆိုဘူး​ပြောထားပြီးသားပါ.. ဒီသီချင်းဟာ..ပါတီဆွဲ​တွေနဲ့ပြည်​သူ​တေစိတ်​မများရ​အောင်​ ..ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​အတွက်​အမှန်​တရားကိုလမ်းပြ​ပေးမယ့်​ .သီချင်းမို့ဆို​ပေးလိုက်​တာပါ..​ ထမင်းစားရင်​နားလည်​မှာပါ…သီချင်းရိုက်တုန်းက​​လဲ ကိုယ်​ဂီတမာင်​နှမ​တေအားလုးံနဲ့အတူ ဆို​ပေးပါဆိုလို့ဆို​ပေးတာပဲ…ဘာအ​နှောင်​အဖွဲ့မှမပါလို့ဆို​ပေးတာ.. ကျန်​တဲ့သူတို့ဘာသာ ..စိတ်​ကူးနဲ့ ဇာတ်​လမ်း​တေထပ်​ထားတာ​တော့ကိုယ်​နဲ့မဆိုင်​ဘူး….သိလဲမသိဘူး… ကိုယ့်​လိပ်​ပြာကိုယ်​လုံတယ်​…edit လဲကိုယ်​မဆက်​​တော့မသိဘူး… လာဆဲလို့ […]
အခွခေံပညာ အလယျတနျး နှငျ့ မူလတနျး အဆငျ့ ကြောငျးပွနျဖှငျ့မညျ့ရကျကို ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျ
အခွခေံပညာ အလယျတနျး နှငျ့ မူလတနျး အဆငျ့ ကြောငျးပွနျဖှငျ့မညျ့ရကျကို ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျမရဘဲ ၊ကိုဗဈဗဟိုကျောမတီ၏ ညှနျကွားခကျြ ရမှာသာ ထုတျပွနျပေးသှားမညျဟု သိရ ယခုအခြိနျသညျ ကိုဗဈကပျရောဂါဖွဈပှားနသေညျ့ ကာလဖွဈသညျ့အတှကျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျမရဘဲ ၊ကိုဗဈဗဟိုကျောမတီ၏ ညှနျကွားခကျြ အတိုငျးလုပျဆောငျရကွောငျး၊ ညှနျကွားခကျြရပါကကြောငျး ဖှငျ့မညျ့ရကျကို ထုတျပွနျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ […]